, कपाल झरेर दिक्क हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता लिनु पर्दैन
कपाल झरेर दिक्क हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता लिनु पर्दैन
23350 पटक पढिएको
कपाल मानिसकाे साैन्दर्यताकाे मुख्य वस्तु हाे । तर पछिल्लाे समय कपाल झर्ने समस्याले मानिसहरुलाई हैरान परेकाे छ तर अब चिन्ता लिनु पर्दैन । पछिल्लाे समयकाे अनुसन्धनमा १० वटा सजिला तरिकाहरुको पुष्टि गरेका छन जसलाई पालना गर्दा कपालका सबै खाले समस्याबाट छुट्कारा प्राप्त गर्न सकिन्छ :-
१) अमला टुक्रा गर्ने र नरिवलको तेलमा मिसाउने । त्यसपछि, एकछिन घाममा अथवा आगोको प्रयोग गरी तातो बनाउने । अव फेरी त्यसलाई सेलाउने र कपालको जरामा पुग्ने गरी त्यसलाई लगाउने । यस्तो गर्दा कपाल झर्ने सम्स्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
२) अन्डाको पहेलो भागलाई मिसाउने र धैरै समयसम्म त्यसलाई घोल्ने । त्यसपछि घोलीएको रसलाइ कपाको जरा जरामा लगाउने । एसले गर्दा कपालाई मझ्भुत बनाउनुका साथै कपाल झर्ने क्रमलाई रोक्न सकिन्छ ।
३) ग्रिन टी अर्थात हरीयो चियालाई पानीमा उमाल्ने र त्यसलाई करिब एक घन्टा सम्म सेलाउने र त्यो रसमा कागतीको रस मिसाउने । त्यसपछी कपालमा लगाउने र घाम लागेको ठाउँमा गएर कपाललाइ सेकाउने । यस्तो तरीका अप्नाउँदा तपाइले कपाल झर्ने समस्यालाई पर भगाउन सक्नुहुन्छ ।
४) घिउकुमारीमा रहेको चिल्लो पदार्थ निकालेर कपाल झरेको ठाँउमा अथवा कपाल नभएको ठाँउमा लगाउने र आधा घन्टा पछि त्यसलाइ सफा पानिले पखाल्ने । यस्तो गर्दा कपाल झर्ने समस्यामा अलिक कम हुने गर्दछ ।
५) अनारको बोक्रालाई मसिनो गरी पिसेर टाउकोमा लगाउनाले कपाल बाक्लो हुने र कपाल झर्नबाट बच्न सकिन्छ । यो उपायलाई अप्नाउदा तपाइको कुनै पैसा खर्च गर्नु नपर्ने बिग्यहरुको भनाई रहेको छ ।
अम्लपित्तको सफल उपचार (Successful Treatment of Acidity)